Indlela yokwenza okugeza amanzi
Isikhathi esining impela, ukufunda ukhilimu kadokotela, inhlama mnene noma buso yezimonyo, sithola ukubonakaliswa "okugeza amanzi". Kunengqondo ukuphetha ngokuthi yonke into kusukela ebuntwaneni wazi ukuthi kuyini, kodwa, nokho, umbuzo zendlela yokwenza a okugeza amanzi kahle, akaphelelwa ukuhlobana, ikakhulukazi besifazane abasebasha ekuqaleni nje ukufunda izisekelo yobuciko Culinary.
Ngakho, zama ukuqonda butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi inqubo. Umbuzo wokuqala - nini futhi kungani sidinga a okugeza amanzi. Kuwufanele sinake le ndlela Ukushisa kanye ukupheka ezimweni lapho:
Kudinga ancibilike imikhiqizo okuyinto ebucayi okushisa aphakeme kukhona ukuze zingasivimbi ukuba zivutha kunanyathelwe glassware. Nge okugeza amanzi ushokoledi elicibilikile, uwoyela ibhotela noma insipho base ekhaya insipho ukwenziwa.
Kuyadingeka ukuba kulungele noma iyiphi izithako lokushisa elincane (50-60 °). Lokhu ngokuvamile kuyadingeka enkulu ekwakhekeni buso izinwele nobuso, okuhlanganisa amafutha yemvelo - lapho evuthayo, basuke ugxile kangcono futhi ibe nomphumela obonakalayo okuningi.
Udinga ukulungiselela zezinkambi noma infusions amakhambi, ngaphandle kokulahlekelwa inqwaba izithako enenzuzo engabangelwa ayafa by abilayo.
Kunesidingo ukufudumeza ukudla zithambekele ukushintsha isakhiwo ngaphansi kwethonya lokushisa - isikhuphasha, gelatin, njll
Kuzo zonke izimo ngenhla, njengasezulwini nabanye abaningi, kubaluleke kakhulu ukwazi indlela yokwenza a okugeza amanzi. It Ubuye nezimfanelo ezingavamile zomunye ayo kanye nemithetho, ulwazi okuyinto ukugwema amaphutha ezivamile.
Okokuqala, thola a okugeza amanzi ngenkazimulo uma kukhethwe kahle izitsha, kodwa lokho akulona yonke imininingwane nibaluleke ukunaka.
pan Lower noma isitsha ukuba bottomed futhi, mhlawumbe, izindonga mkhulu. Kulokhu, ukubila ngeke ngokushesha futhi amathonsi amanzi ngeke bangene eziningi uzilungiselele.
Phansi phansi izitsha qiniseka Mboza ahlanzekile ithawula nelineni noma ukotini - kuzokwenza ngamathumba ngisho kahle kakhulu futhi ngokunembile, kuyisihluthulelo kanjani ukwenza okugeza amanzi.
I izitsha eliphezulu kufanele kube ububanzi yokuthi Wathinteka phansi ikholomu amanzi, kodwa donga lwahlala emoyeni. Kulesi simo umphumela esiphezulu - esitsheni engenhla icutshungulwe nge umusi ashisayo futhi amanzi kuzoba cishe inhliziyo. Oku-pick izitsha ukuthi uvumelane nomunye ububanzi, futhi khumbula lokhu "umbhangqwana" - ngokuzayo uzoba ugcine isikhathi sifuna izitsha efanelekayo.
Waterbath ekhaya kudinga esishukumisayo okuqhubekayo ingxube esitsheni engenhla. Lokhu kusiza ukulawula ukungaguquguquki kwalo lonke ushintsho futhi ungaphuthelwa isikhashana lapho isitsha uzodinga ukususa ngenxa yokushisa.
isitsha ivinjelwe ebhodweni elikhulu kufanele kube kuphela emva abilayo ke emanzini, kungenjalo ziyophulwa inqubo amalahle ingxube ibhalwe, futhi umphumela kungaba zihamba hhayi ngakho, njengoba singathanda.
Ekulungiseleleni infusions amakhambi, imithi angeke ugovuze ingxube ngokuqhubekayo kusukela njengoba induku ngeke kwenzeke ngokushesha. Kungcono alisibekele lid ukuvimbela shabalala lo amafutha abalulekile, ngokuvamile izithako main asebenzayo of imithi yendabuko.
Uma lo ububanzi we izitsha eliphezulu kakhulu kuvumelana pan phansi, kuba ngaphambili ezidingekayo ukuze sikhathazeke ngayo kuyoba kanjani kungenzeka ukuyikhipha ngemva bafudumale. Kungenzeka kunomvuzo hang phezu kwamanzi ngosizo intambo obukhulu noma ukwenza izibaya ngokurhaba uma azikho.
Lezi imithetho eyisisekelo ephathelene, indlela yokwenza a okugeza amanzi, kuyilapho ekuvimbeleni amaphutha. Kodwa ngisho noma okokuqala unokuthile engasebenzi - ungakhathazeki. kathathu - - amabili kufanele zibe namakhono adingekile ukuze wenze yonke into ngokushesha futhi kalula.
Amagesi Abamba Ukushisa Emkhathini of amabhodlela epulasitiki ngesandla. Amagesi Abamba Ukushisa Emkhathini of amabhodlela epulasitiki: Master Class
Amatafula ngezandla zabo. Imiyalo ukukhiqizwa
Isisekelo kuleli zwe ngezandla zabo: isikimu, izithombe
U-Evgeny Sidikhin (umlingisi): biography kanye namafilimu
Yiziphi izindaba ezimnandi Fairy? Izinhlobo futhi izinhlobo inganekwane
Boyar tvoix rukax - a oyinganekwane. Indaba yokuphila ka-boyar tvoix rukax
Bafake loluhlelekile: kanjani ukukhetha, zama futhi uvumelane umumo
Uhlelo Ukubuyekeza: Video Player iPad
Yini ukuthulula uphethiloli - 92 noma 95? izinga uphethiloli. Amathiphu abantu onolwazi